စစ်သည်တော်ဝိဉာဉ်: + တပ်မတော်သား ဖေဖေ့ အတွက်..
+ တပ်မတော်သား ဖေဖေ့ အတွက်..
ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို အင်တာနက်က ဖတ်လိုက်ရချိန်မှာ တစ်ချိန်က ခံစားခဲ့ရသော ခံစားချက်လေးကို သတိရလိုက်မိတယ်။ ကဗျာလေးကို နှစ်သက်မိသောကြောင့် တင်ပြလိုက်ပါတယ်..
"My Daddy isasoldier"
he's often gone away
and I'm not sure what he does
and sit in his favourite place.
I know thataday may come
when daddy won't come home
and it scares me even thinking
that we will be alone.
and I am so very proud of him
Come home to us daddy
I know that those people need you
Posted by Army Soul at 7:02 PM
my daddy isasoldier ကို ရင်ထဲ ကနေ လေးလေးနက်နက် ခံစား မိပါတယ် .....ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ အဖေ ကစစ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်နေသလို .... ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က လည်း စစ်သား မို့ ပါ ။
အခုမှဖတ်မိပေမယ့် ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးပဲဗျာ..။
+ ဆယ့်တစ်နှစ်တာ ခရီးဝယ်
+ စိတ်အစဉ်မှ ပြစ်မှားမှုကို တောင်းပန်ခြင်း